China abakhiqizi be-single facer SF-280S nabaphakeli | Xinguang
Ukusebenzisa isakhiwo se-hood sokudonsa, kufana ne-blower high pressure blower. Ukudonsa nge-silencer., Umthombo womoya nokulawulwa kwegesi ku-counter efanayo yokusebenza, kude ne-motor akuyona ngaphansi kwe-1.5m, uhlangothi olusebenzayo luvale ikhava ephelele.
Ukusetshenziswa kwesakhiwo sokumunca hood, kufana ne-blower high blower eqinile.Suction nge-silencer., Umthombo womoya nokulawulwa kwegesi ku-counter efanayo yokusebenza, kude nemoto akuyona ngaphansi kwe-1.5m, uhlangothi olusebenzayo luvale ikhava egcwele.
Isisekelo nodonga lwensimbi oludongeni, ubukhulu be-Wallboard
I-roller material i-corrugated isebenzisa i-48CrMoalloy steel, icishiwe 、 ukuqina kwe-Laser, ukuqeda komhlaba, ukuqina okuyisisekelo sobubanzi bukathayela ¢ 280mm, ukuqina kobusoHRC60degree ngenhla
Ingcindezi roller ¢ 284mm, ukugaya indawo yangaphakathi ne-chrome-plated ； isilinda control bese ususa phezulu naphansi, izinto zensimbi ezingama-45 zensimbi, ukucisha (ngamadivayisi wokuqinisa).
★ i-pneumatic control glue yokunamathisela emuva, i-glue roller ububanzi ￠ 215mm, Indawo eqoshiwe ebunjiwe ngemuva kwesitayela semigodi engu-25 yomugqa womgogodla owenziwe ngomshini owenziwe ngomshini, ngemuva kokukhuhla indawo yokugwedla i-chrome eqinile.
Ama-roller lukathayela, izinto zokucindezela ingcindezi ezihlinzekwa yi-Central Plains Steel, Ephezulu ekuhlanganiseni i-unilateral 0.15mm, 0.075mm high pressure roller unilateral. Isitobha sokuhlanganisa. ¢ 160mm isilinda nge kokucindezelwa isilinda.
I-preheat roll yamukela ukukhiqizwa kwepayipi lensimbi elingenamthungo nge-tiangang ¢ 300mm, ngokuxhuma nensimbi yensimbi.
1, ububanzi ngempumelelo: 1600mm
2 、 isiqondiso sokusebenza: kwesobunxele noma kwesokudla ined Kunqunywa ngokuya ngesitshalo sekhasimende）
3, isivinini sokuklama: 100m / min
4 range ibanga lokushisa: 200—260 ℃
5, umtshingo lukathayela: UV uhlobo noma UVV uhlobo
1, lukathayela we-roll ubukhulu: ￠ 280mm
2, ingcindezi roll roll: ￠ 285mm
3, i-glue roll roll ububanzi: ￠ 216mm
4, preheat roll ubukhulu: ￠ 320mm
1, main drive motor: 7.5KW ulinganise amandla kagesi: 380V 50Hz okuqhubekayo, uhlelo lokusebenza lwe-S1.
2, ukudonsa imoto: 7.5KW ulinganise amandla kagesi: 380V 50Hz okuqhubekayo, uhlelo lokusebenza lwe-S1,
Langaphambilini Isici esisodwa SF-320C
Olandelayo: Isifudumezi Sokushisa Isitsha
Wj 200 1800 lukathayela amakhadibhodi Umkhiqizo ...
I-facer eyodwa ye-SF-360C1 (405C1)
Syk1224 4 Umbala Ukuphrinta Slotting Die Cutting W ...